प्रेमसँग जोडिएका छन् यस्ता रोचक तथ्य - प्रेमसँग जोडिएका छन् यस्ता रोचक तथ्य -
प्रेमसँग जोडिएका छन् यस्ता रोचक तथ्य
उज्यालो प्रतिनिधि १० श्रावण २०७८, आईतवार शिक्षा
काठमाडौँ । माया के हो ? यो कस्तो हुन्छ ? भन्नेबारे जतिनै तर्क गरेपनी सायद त्यो अपुरो नै होला । किन कि, माया हाम्रो मन मुटुले महशुस गर्ने एक आभाष हो । त्यसैले मायाको परिभाषा मानिसहरुले आ-आफ्नै किसिमले दिन सक्छन् । जब तपाई कसैको मायामा पर्नुहुन्छ वा जब तपाई आफ्नो मनैदेखि कसैलाई चाहन थाल्नुहुन्छ वा मनपराउन थाल्नुहुन्छ तब तपाई खुद आफैँले मायाको अर्थ बुझ्नुहुनेछ ।मायाको अर्थ जस्ले जे नै भनेपनि तर एउटा साँचो माया यतिसम्म शक्तिशाली हुन सक्छ कि, त्यसको अन्दाज कसैले पनि लागाउन सक्दैन । किन कि, मायाको कुनै मापन छैन र ‘पावर अफ लभ’ कति भन्ने अनुमान नै गर्न सकिन्न । भनिन्छ नि, ‘यो दुनियाँ मायाले नै चलेको छ ।’ आज हामी तपाईहरुलाई मायाबारे केहि यस्ता रोचक तथ्यहरु जानकारी गराउँदैछौँ जुन सुनेर तपाईको मन प्रफुल्ल हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
– एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर दैनिक तिस लाख भन्दा ज्यादा जोडीहरु डेटमा जाने गर्छन् ।
– तपाईको दिमागले त्यतिबेला कम काम गर्दछ जतिबेला तपाई ‘रोमान्टिक मुड’मा हुनुहुन्छ ।
– मनोवैज्ञानिक अनुसार यदि तपाई दुख वा पिडाको बेला तपाईको माया भएको मान्छेसँग अँगालो लाग्नु भएमा त्यो अँगालोले तपाईको नर्वस सिस्टममा पेनकिलर सरह काम गर्दछ ।
– अर्जेन्टिनाको एक किसानले आफ्नो स्वर्गीय पत्नीको यादमा सारा जिन्दगि एक ‘गिटार’ शेप्ड खेतमा, खेति गरेको थियो ।
– सामान्य मानिसहरुबीच ‘लभ म्यारिज’को सुरुवात १८ औं शताब्दिबाट सुरु भएको मानिन्छ ।
– तपाई मायामा पर्नुभएपछि कम्तिमा पनि तपाईको दुईजना साथी तपाईबाट टाढा हुन्छ ।
– कतिपय जीवजन्तुहरु पनि जिन्दगीभर एकैसाथ रहने गर्छन् । यिनीहरुमा पनि एक साथी वा एक जोडी सँगै रहने नियम पालन भएको हुन्छ ।
– वैज्ञानिक मान्यता अनुसार मायाले मानिसको दिमागमा एउटा एस्तो ठाउँ बानाउँने गर्छ कि उस्ले त्यतिबेला परमसुखको अनुभुति गर्ने गर्दछ । यो त्यही प्रकारको अनुभुति हो जतिबेला तपाईलाई नशाको बेला हुने गर्छ ।
– वैज्ञानिक रुपमै यो कुरा सिद्ध भैसकेको छ कि, मायामा परेका व्याक्ति आफ्नो काममा पुरा ध्यान दिन सक्दैन जस्ले गर्दा उस्ले गर्ने कार्यगर्ने क्षमता प्रभावित हुने गर्छ ।
– सन् २०१४ मा एरिजोनामा “भ्यालेनटाइन डे”का दिन एक कैदी आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्न जेलबाट भागेका थिए ।
– के तपाईलाई थाहा छ ? इन्टरनेटअघि LOL को अर्थ ‘Lots of Love’ हुन्छ ।
– जिन्दगीमा माया एक अपरिहार्य चिज हो । यदि कसैको जिन्दगीमा माया छैन भने उसलाई एक्लोपनले पिरोलेर मानसिक रोगको शिकार पनि हुन सक्छ ।
– “एरोटोमानिया” त्यो मानसिक स्थिति हो जस्मा पर्ने मानिस यो सोच्ने गर्दछ कि, कोहि प्रसिद्ध व्याक्ति उस्को मायामा परेको छ ।